घरैमा केटा ल्याएर राख्थिन् शुष्मा, छोरी आमाको कोठामा जान खोज्दा आउँन दिन्थिनन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारघरैमा केटा ल्याएर राख्थिन् शुष्मा, छोरी आमाको कोठामा जान खोज्दा आउँन दिन्थिनन् (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 2, 2021 admin समाचार 8389
सुस्मा नाम गरेकी एक महिला जो ड’ण्डामा बस्दै आएकी थिईन् । उनी वि’बाहीत हुनुका साथै एउटी छोरीको आमा पनि हुन् । सुस्माको ८ वर्षकी छोरी पनि छन् । एउटी बच्चाकी आमा उनी छिमेकीलाई केही दिन मा’ईत बसेर आउँछु भन्दै गएकी उनी अहिलेसम्म घरमा फर्किएकी छैनन् ।
सुस्मा घर नफ’र्किएको भन्दै छिमेकीले सोशल मिडियालाई बताए वास्त’विकता । छिमेकीसंगै सुस्माको बारेमा उनकै जेठानीले पनि खोलि’दिईन् सबै वास्तविकता ।जेठानीको भनाईमा सुस्मा’लाई फोन आएको आऐ हुन्थ्यो । तर उनले फोलाई साई’लेन्ट मोडमा राख्ने गर्दिन् । जेठानी भन्छिन्,‘हामी देउरानी जेठानी मिल्थेउँ ।
आफ्ना कुराहरु पनि एक’अर्कासंग साँट्ने गथ्यौं । तर उनले यस्तो कुरा क’हिल्यै भनिन् । संगै बसेर कुरा गर्दा फोन त निकै नै आउँथ्यो । तर उनले उठा’उँदैनथिन् । जहिले साईले’न्टमै हुन्थ्यो उनको फोन । उठाउन भन्दा कहिले देवरको भन्थिन् त कहिले उनकै बुढाको भनेर टारि’दिन्थिन् । मेरो छेउमा क’हिल्यै फोन उठाईनन् ।’- इताजा खबरबाट
अनिताको सबै भन्दा जोखिम अप्रेशन हुदै, अप्रेसन सफल नभए पाएप बाटै जीवनभर सास फेर्नु पर्ने (भिडियो हेर्नुहोस्)
आज २०७७ पुस १९ गते आइतबारको राशिफल हे्नुहोस्
शिशिर भण्डारीको नयाँ गीत ‘मुरली तिरीरी’ सार्वजनिक (भिडियो हे’र्नुहोस)
February 9, 2021 admin समाचार 6854
सँचारकर्मी तथा कलाकार शिशिर भण्डारीको नयाँ गीत सा’र्वजनिक भएको छ । उनले ‘मुरली तिरिरी’ बोलको गीत सार्व’जनिक गरेका हुन् । दिपकराज पाठकको प्रस्तु’तिमा रहेको यस गीत शिशिर भण्डारी, बेनिशा पौडेल, आयुष्मान चापागाईंमा स्वरवद्ध गीत ब’जारमा
आइतबारका दिन यस्ता काम गर्नाले मिल्नेछ सफलता
November 1, 2020 admin समाचार 10364
शास्त्रले मानिस’को जीवन पद्धतिका वि’षयमा सवै जान’कारी दिएको हुन्छ । कुन दिन के काम गर्ने ? के गर्दा जी’वनमा सफलता मिल्छ ? के कस्ता काम गर्नुहुँदैन ? लगा’यतका यावत विषयमा धर्मशा’स्त्रमा सवि’स्तार वर्णन गरिएको पाइन्छ
मंसीर २२ गते नायिका स्वेता खड्काको बिहे, को संग गर्दै छिन् त हेर्नुहोस्
November 29, 2020 admin समाचार 9113
अभि’नेत्री स्वेता खड्काले धनगढीका युव’कसँग मंसीर २२ गते बिहे गर्दैछिन् । स्रोतका अनुसार नायिक स्वेताले ध’नगढीका युवक विजेन्द्र रावतसँग मंसीर २२ मा लगन’गाँठो कस्दैछिन् । स्वेताले बिहे गर्न लागेका युवक धन’गढीका विजेन्द्र रावत हुन् ।
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242104)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229632)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227426)